Njara Pascal – Page 3 – Trinitera Malagasy
18 mars 2020 Njara Pascal
2 Samoela 7, 4-16/ Salamo 88/ Romana 4, 13-22/ Md Matio 1, 16-24 Ny vakiteny voalohany dia mampanantena an’i Davida fa ny taranany no hanjaka mandrakizay, satria Andriamanitra no hanome azy ny fiandrianana. Tsara hotadidiana ihany anefa ny nanjo ireo zanany naterany: ny lahimatoa (Amona) novonoin’ny manarakaraka (Absaloma) (2Sam 13), Absaloma nikomy nanohitra an’i Davida…
Jeremia 7, 23-28/ Salamo 94/ Md Lioka 11, 14-23 Mizotra mankany amin’ny Paka isika, miomana isan’andro amin’ny fanavaozana ny toky nomena tamin’ny Batemy. Ny Tenin’Andriamanitra aroson’ny Fiangonana anio dia mampahatsiaro antsika ny maha-zava-dehibe ny fihainoana sy fitoriana ny Teny. Amin’ny Batemy dia Izy Kristy no manasitrana antsika amin’izay tsy fahaizantsika midera an’Andriamanitra, satria tsy…
17 mars 2020 Njara Pascal
Det 4, 1-9/ Salamo 147/ Mt 5, 17-19 “Ankehitriny ry Israely, henoy ny didy amam-pitsipika atoroko, hitandremanareo azy mba ho velona ianareo, ka hiditra sy hanana ny tany tany nomen’ny Tompo Andriamanitry ny razanareo anareo”. Ny vakiteny voalohany dia mampahatsiaro antsika zavatra maro tokony hiainantsika noho ny batemy izay noraisintsika. Nomen’Andriamanitra ny Lalàna, ny torolalana…
La domenica è un tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo studio e la meditazione, che favoriscono la crescita della vita interiore e cristiana.